Otu esi etinye VLC Media Player na Linux Mint 20 - LinuxCapable
Otu esi etinye VLC Media Player na Linux Mint 20
October 12, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Nhọrọ 1. Wụnye VLC na APT Manager
Wụnye Nhọrọ 2. Wụnye VLC na Snap
Wụnye Nhọrọ 3. Wụnye VLC na Flatpak
Otu esi ebido VLC Media Player
The VLC media player bụ isi mmalite mepere emepe, mkpanaka efu, sọftụwia ọkpụkpọ mgbasa ozi na ihe nkesa mgbasa ozi sitere na ọrụ VideoLAN mepụtara. VLC nwere ike igwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ faịlụ mgbasa ozi niile ama ama na DVD, CD ọdịyo, VCD, na usoro mgbasa ozi dị iche iche ma nwee ike ịgbatị ma hazie ya na ọtụtụ plugins.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye VLC Media Player na sistemụ Mint Linux gị.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa dabara adaba nke Linux Mint nyere. Nke a bụ nsụgharị kwụsiri ike ma dị nchebe, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ụbọchị ọ ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-eso onye ọkpụkpọ.
Ozugbo arụnyere, kwado ụdị nrụpụta nke ga-egosikwa na nrụnye ahụ gara nke ọma.
A na-edozi mmelite site na iji ọkọlọtọ apt update & iwu nkwalite nke ị ga-eme na mmalite nkuzi.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye VLC n'iji APT, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
Nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla ejiri VLC arụnyere na mbụ na-akpaghị aka.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Linux Mint nwere ike ịma Snap ka ọ na-eme ya ma na-elekọta ya site na Ubuntu agbanyeghị na ọ naghị abanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Na-esote, ịkwesịrị ịwụnye faịlụ "snap core" ka ihe niile wee rụọ ọrụ nke ọma. Emeghị nke a nwere ike bute nsogbu na egwu.
Ọzọ, wụnye ngwugwu VLC site na iji snap:
Dị ka n'elu, nke a na-agwa gị na VLC arụnyere nke ọma na nọmba mbipute.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye VLC Media Player, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Mint Linux adịghị mkpa ịwụnye Flatpak ka ọ na-abịa na ndabara na sistemụ gị. Nke a bụ nhọrọ ọzọ ewu ewu dị ka Snap.
Ọzọ, wụnye VLC site na iji iwu flatpak:
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke VLC Media Player, gbaa iwu a:
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mwepụ nke VLC site na iji Flatpack.
Ugbu a na ị nwere VLC ọkpụkpọ arụnyere launching VLC nwere ike mere ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite VLC wee jiri ọnụ, ziga ya na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ogwe ọrụ> ụda & ọdịyo> ọkpụkpọ mgbasa ozi VLC. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Oge ị mepee ọkpụkpọ mgbasa ozi VLC, a ga-ekele gị Amụma nzuzo na ịnweta netwọkụ mmapụta dị ka n'okpuru.
Họrọ nye ohere netwọk metadata ma ọ bụ mechie nhọrọ iji gbanyụọ ma pịa na Gaa n'ihu.
Ekele, ị tinyela ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi VLC.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye ebe nchekwa ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi VLC gọọmentị, wụnye VLC wee malite wepụ ya na sistemụ arụmọrụ Linux Mint gị.
N'ozuzu, VLC Media Player bụ otu n'ime egwuregwu mgbasa ozi ama ama n'etiti sistemụ arụmọrụ niile. Maka ezi ihe kpatara ya, ebe ọ bụ n'efu, ọ na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị faịlụ niile ama ama na-etinyeghị codecs ọzọ yana na-ebuli egwu vidiyo na ọdịyo maka ngwaọrụ gị. Ihe ọ bụla VLC enweghị ike ime nwere ike ịgbatị ngwa ngwa na plugins.